super-typhoon | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT လမ်းကြောင်းမြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ်ရွေ့
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏ လမ်းကြောင်းမှာ မြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ်ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း TSR ၏ လာမည့် ၂၄ နာရီ ခန့်မှန်းချက် အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတကာ မိုးလေဝသဌာန ၆ ခုမှ ခန့်မှန်းခြေလမ်းကြောင်းပုံ တွင် ဟောင်ကောင်၏ ခန့်မှန်းချက်မှာ တောင်ဘက်တွင်သာရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီး ဘေဂျင်းနှင့် ဂျပန်တို့၏ ခန့်မှန်းချက်လမ်းကြောင်းမှာမူ မြောက်ဘက်သို့ များသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သမုဒ္ဒရာရေအပူချိန်နှင့် သေသတွင်းဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိနေသည့် လေထုလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းချက်များ အပြောင်းအလဲ အနည်းငယ်ရှိနိုင်သည်ကို mmweather မှ ပြီးခဲ့သည့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းများအား လေ့လာခဲ့ရာတွင် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပိုမို သိရှိလာပြီဟု ယုံကြည်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ မိုးလေဝဌာန ၆ ခုမှ ခန့်မှန်းသော လမ်းကြောင်း (အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ)
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏ နောက်ဆုံးရရှိသည့် အခြေအနေများကို ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားပါမည် –
TSR မှ ယနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝဝး၃ဝ နာရီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံး အတွက် CAT1 နှင့် အထက်အဆင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေ ၅ဝ% ၊ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေ ၈ဝ% ရှိကြောင်းဖေါ်ပြထားပြီး အနီရောင်အဆင့် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားကာ၊ Soliven (17.0 N, 122.4 E)၊ Laoag (18.2 N, 120.7 E)နှင့် Vigan (17.5 N, 120.5 E) မြို့များအတွက် အဆင့်-၁ CAT-1 ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေ ၅ဝ%မှ ၆၅% အထိရှိကြောင်းဖေါ်ပြကာ အဝါရောင်အဆင့် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည် ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ (TSR သတိပေးချက် မူရင်းအား ဖေါ်ပြထားပါသည်)
Storm Alert issued at 20 Oct, 2009 18:00 GMT
လာမည့် ၂၄ နာရီအတွက် ခန့်မှန်းထားသည့် မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခံရမှုဖြစ်နိုင်ခြေ ရာခိုင်နှုန်းပြ ပုံတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအပြင် ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းသည်လည်း မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုခံရနိုင်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, super-typhoon, tropical-storm, typhoon, weather. LeaveaComment »